Waa dalkee Dalka Africanka ee Lacagti Libya ee Qadaafi haysta,Hadana Diidey Inuu U Celiyo Libya? - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalWaa dalkee Dalka Africanka ee Lacagti Libya ee Qadaafi haysta,Hadana Diidey Inuu U Celiyo Libya?
179 Diyaarad ganacsi oo Liibiya ah ayaa balaayiin doolarka oo Laga Qaaday Liibiya gaysay dalka Koonfur Afrika xilli mugdi ah sanadkii 2011, kadib markii hogaamiyaha Liibiya Mucamar Qadaafi uu ka war helay halista kacdoonkii caanka ahaa ee riday isaga iyo maamulkiisa bilo yar kadib.
Baadhitaan telefishan oo ay sameeyeen agaasimayaasha Misha Wessel iyo Thomas – oo rabshado ka dhalisay Netherlands – ayaa shaaca ka qaaday halka ay ku dambaysey balaayiin doollar oo laga xaday Liibiya, waxayna muujiyeen natiijooyin cajaa’ib leh ka dib in ka badan 3 sano oo ay daba socdeen xarigyo badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan xaqiiqooyin,sida loo soo bandhigay filimka baaritaanka “Baadigoobka Balaayiintii Qaddaafi.” , Kaas oo dhawaan lagu soo bandhigay TV-ga rasmiga ah ee Holland.
Sida laga soo xigtay baaritaanka, Qadaafi ma uusan aaminin bangiyada caalamiga ah ama jeegaga bangiyada, wuxuuna aruurinayay doolarka Mareykanka, oo uu Geeyey Dalala kala Duwan, markii dhibaatada Liibiya ay ku sii xoogeysatay dalal dhowr ah, oo ay ku jirto Koonfur Afrika, halkaas oo lacagta gaadhay dalkan Afrikaanka ah oo keliya ay tahay. Lacag lagu qiyaasay 12.5 bilyan oo doolar.
Ujeedkiisu ma ahayn Qadaafi – sida ay sheegeen kuwa isaga ku dhow, sida filimku shaaca ka qaaday – inuu la baxsado lacagtiisa meel ka baxsan Liibiya. Saas ma aha, wuxuu qorsheynayay inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah kooxaha ka soo horjeeda ee dibadda ka yimid ,haddii duruufuhu ay ku qasbaan inuu ka tago Liibiya, qorshihiisuna wuxuu ahaa in dagaalku uu sii dheeraado, oo ay u baahan tahay lacag badan, oo uu sannado badan si gaar ah u keydinayey.
Lama oga ilaa iyo maanta halka ay ku dambeyn doonto lacagtaan, maadaama lagu soo aruuriyay konteenarro gaar ah loona wareejiyay meel aan la ogeyn oo ku taal Koonfur Afrika, wixii macluumaad rasmi ah ee ku saabsan imaatinka diyaaradda gaarka loo leeyahay ee Liibiyana laga saaray duulimaadyada rayidka.
Filimku wuxuu toos u tilmaamayaa eedaha ah in lala wareegayo lacagtii Liibiya .oo uu Haysto xisbiga haya talada dalka ee Koonfur Afrika, maxaa yeelay dhammaan caddayntu waxay tilmaamayaan doorka ay ku leedahay maqnaanshaha lacagahaas, taas oo u baahan karta dadaal caalami ah oo loogu celiyo Dalka Burburay ee Liibiya, waddanka dadkiisu ku dhibaataysan yahay Dhibaatooyinka dhaqaale ee waaweyn.
Kooxda Dabagalka ee filmka Ayaa wareysi siiyay Al-Jazeera Net, waxay sharraxaad ka bixiyeen sababaha ay u daneynayaan lacagta Liibiya ee luntay, iyagoo sheegay in sheekadu ay bilaabatay markii Thomas Blume uu ku sugnaa Liibiya si uu u duubo barnaamij socdaal ah oo telefishanka Nederland Laga Baahiyo , halkaas oo uu goobjoog ka ahaa saboolnimada weyn ee Ka Jirta Dalkani qaniga ku ah kheyraadka dabiiciga.
Labada agaasime waxay xaqiijiyeen in Bloom ay maqashay warar xilligaas la isla dhex marayay oo ku saabsan halka ay ku dambaysay lacagtii Liibiya, taas oo Qadaafi uu ka cararay ka hor inta aan la dilin, su’aashuna waxay bilaabatay inay sii kororto, “Kadib waxaan go’aansanay inaan baaritaan ku sameyno halka ay ku dambayso lacagtaan. ”
Filimkan waxaa la socda jilayaal jinsiyado kala duwan leh, iyagoo raadinaya lacagta Liibiya ee Koonfur Afrika iyadoo la filaayo abaalmarin, taasoo ay dowladda Liibiya shaacisay sannado ka hor, isla markaana u ballan qaaday 10% qofka ama hay’ad lacagta ku celisa Liibiya.
Abaalmarinta (oo u dhiganta boqollaal milyan oo doolar) Taasi oo Iyagana Hunguri Kasii Galay Lacagta koox jilayaal ah, oo ay ku jiraan kuwa aad ugu dhowaa taliskii hore ee Liibiya, midkoodna waa nin reer Tuunis ah oo lagu magacaabo Eric Jawid, kaas oo dhexdhexaadiye ka ahaa heshiisyadii hubka ee hore ee maamulkan.
Waxaana jira kuwa jooga Koonfur Afrika lafteeda oo bilaabay dadaallada ka socda Golaha Qaranka ee Afrika si ay dowladda uga cadaadiyaan in ay dib ugu celiso lacagta iyadoo la filaayo abaalmarin, in kasta oo dowladdani aysan weli aqoonsan in Lacagta Liibiya uu gaaray dalkeeda.
Markhaatiga waxaa ladilay wareysigiisa kadib,
Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray kuwa ku guuleystay inay sawirro ka qaadaan “konteenarrada alwaaxda Liibiya” ee yimid Koonfur Afrika, oo ay ku jireen lacag Doollar ah, waxayna sawirradan u direen koox uu ku jiro jaajuus u dhashay Serbia oo ku nool Koonfur Afrika.
Filimku wuxuu ku guuleystey inuu la kulmo shaqsigan reer Serbia ah, kaasoo shaaca ka qaadey sawirada lacagta Liibiya, oo yimid Koonfur Afrika, laakiin basaaskan waxaa la diley maalmo kadib wareysigaas .
Maalmo ka dib dhacdadaas, booliska Serbia waxay heleen maydadka laba nin, oo ay u badan tahay kuwii wax dilay, iyada oo booliisku aanu helin jawaabo la xidhiidha dilka.
Sida laga soo xigtay agaasimayaasha filimka, saraakiisha Koonfur Afrika ayaa diiday inay ka soo muuqdaan filimka, dhammaan heerarka dalalkooduna way diidayaan tahriibinta lacagta Liibiya iyaga.
iyo agaasimaha Holland wuxuu rumaysan yahay in balanqaadkii dawlada Liibiya ee ahaa inay abaalmarinayso kuwa kusoo celiya lacagta laga dhacay Liibiya ay adkaatay . Bloom waxay aaminsan tahay in “xalalka nabadeed ee Liibiya ay yihiin kuwa ugu muhiimsan maanta, intaas ka dib wafdi rasmi ah oo ka socda Liibiya ayaa aadi kara Koonfur Afrika.” Si loo dalbado lacagta Liibiya, iyo in dowladda Liibiya aysan ku tiirsanaan kuwa raadinaya abaalmarin lacageed. ”
Filimka baaritaanka ee Holland wuxuu ka sheekeynayaa taariikhda xiriirka dheer ee ka dhaxeeyay Qadafi iyo ANC, maadaama hogaamiyihii geeriyooday ee Nelson Mandela uu dhiiri galiyay Qadafi sanado. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale kulmay kadib markii Mandela laga sii daayay xabsiga.
Mandela wuu diiday dhowr jeer dhaleecaynta reer galbeedka ee isaga ku saabsanayd saaxiibtinimada uu la leeyahay Qadaafi, xitaa wuxuu ku sifeeyay midka rajaynaya in saaxiibkiis uu cadow u noqdo cadowgiisa oo doqonnimo siyaasadeed.
Sidoo kale Qadaafi wuxuu dhaqaale ku biiriyay ololihii Xisbiga National Congress Party ee doorashadii Koonfur Afrika, wuxuuna saameyn weyn ku yeeshay geedi socodka siyaasada. Waa run in saameyntaasi ay hoos u dhacday xukunkii Madaxweyne Thabo Mbeki (1999-2008), oo diiday dadaalkii Qadaafi uu ku doonayay inuu ku helo magaca Boqorka Afrika; Si kastaba ha noqotee, waxay ku soo noqotay gobolkeedii iyada oo xukunka uu hayo madaxweyne Jacob Zuma